Farmaajo: Taageerada militari ee Mareykanka waxay inoo suurtagelisay inaan si hufan ula dagaalano Al Shabaab – AfmoNews
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya ayaa Dowladda Mareykanka ku ammaanay inay taageero militari siiso Somaliya.
Madaxweynaha Somaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay taageerada militari ee Mareykanka inay Somaliya ka caawisay in si hufan loola dagaalamo Ururka Al Shabaab.
“Taageerada militari ee Mareykanka uu siiyo Somaliya waxay inoo suurtagelisay inaan si hufan ula dagaalano Al Shabaab, lana suggo amniga Geeska Afrika.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in guul laga gaaro la dagaalanka Al Shabaab iyo iskaashiga labada dal, ay ku imaan karto iskaashi joogto ah, oo laga yeesho arrimaha ammaanka iyo dhismaha Ciidamada Qalabka Sida.
“Guul laga gaaro safarkan iyo iskaashiga u dhaxeeya Somaliya iyo Mareykanka waxaa lagu gaari karaa oo keliya iskaashi joogto ah, oo xagga amniga iyo taageerid dhisid ah.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Warka ka soo yeeray Madaxweynaha Qaranka ayaa ku soo aadaya, xilli dowladdiisa lagu dhaliilo inay ka gaabisay la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab, isla-markaana uu dhow dhow yahay muddo xileedkiisa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ololihiisii doorashada ee afar sano ka hor waxaa uu ballanqaaday in muddo laba sano gudahood uu ku soo afjari doono Shabaabka hubeysan, haddii loo doorto xilka madaxtinimada ee dalka, tiiyoo wax ka dhaqangalay aanu jirin.